Shiinaha Sodium/Calcium/Organic Bentonite Clay oo loogu talagalay qodista/warqada/warshada dhoobada iyo alaab-qeybiyeyaasha |Hubang
Budada turmaline cad
Bentonite dabiiciga ah
Garaafyada flake dabiiciga ah
Iftiin milix ah
Leben milix ah
Maifan dhagax kubad
Kubad ion taban
Cadaan heer sare ah oo heer sare ah ayaa...
Dhismaha Warshadda Fiberka Macdanta...
Calcium bentonite sodium waa ...
Sepiolite Fiber Ceyriin Sepioli...
Sodium/Kaalshiyam/Clay Bentonite Organic oo loogu talagalay qodista/warqad/ dhoobada
Our bentonite:Waxa ku jira dhoobada Montmorillonite 85%-91%.calcium bentonite, sodium bentonite, bentonite organic, bleaching budada dhulka.kaas oo loo isticmaali karo in lagu shubo, warqad, dhoobo, galaas iwm.
Noo soo dir macluumaadka U soo deji sidii PDF
Astaamaha ugu muhiimsan ee bentonite: 1. Feejignaanta sare iyo heerka garaaca;2. Awood aad u wanaagsan oo lagu qaado goynta qodista ee hakinta;3. Waxa ay leedahay wakhti dheer oo jilitaan ah, dhoobadana ku ilaali wakhti dheer ka dib marka la isku daro.4. Waxay samayn kartaa lakab keega filter khafiif ah oo cufan si looga hortago daadinta dhoobada;5. Waxay ilaalin kartaa daacadnimada qoditaanka jiifka ilaa xadka ugu badan;6. Waxay baabi'in kartaa balaadhinta fuuq-celinta dhoobada iyo dhogorta, dhejinta sibidhka iyo ka hortagga qalabka qodista inay ku dhegaan.
1. Bentoniteshubista: loo isticmaalo sida xidhe iyo adsorbent, ku haboon tuurista, ceramics iyo daaweynta deegaanka.
2. Bentonitesamaynta slurry: loo isticmaalo sida binder, wakiilka hakinta iyo nuugista, ku haboon qodista saliidda, injineernimada aasaasiga ah iyo sibidhka dhismaha.
3. Kiimikada bentonite: waxaa loo isticmaalaa sidii wakiilka buuxinta, dhumuclaha, wakiilka hakadka ah iyo wakiilka midabaynta ee samaynta waraaqaha, rabadhka, rinjiga, qalinka, warshadaha kiimikada maalinlaha ah, dahaarka iyo dunta.
4. Bentonite for feed: loo isticmaalo sida xidhe iyo adsorbent quudinta digaag, shinbiraha, goose, kalluunka iyo doofaarka.
5. Alaabta Bentonite ee qodista.
Hore: Soo saaraha Shiinaha Bentonite dhoobo iib ah
Xiga: Foornada dabiiciga ah ee Bentonite Sodium Bentonite Calcium Bentonite budada ah ee qodista dhoobada
Calcium bentonite sodium bentonite cad benton...
Acid Bentonite Montmorillonite/Bentonit Dabiiciga ah...
Tusaalaha Bilaashka ah ee Fuller's Earth bleaching.
Sodium bentonite ee shubista iyo qodista
Bulk Bentonite dhoobada budada Qiimaha darajada qurxinta